नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ?
4,4402minutes read
उनको डिल भयो– ५ हजार रूपैंया, ८ घन्टाको समय । खाना, खाजा र दुई बोतल मापसे पनि । साथमा चाहेको सबै पनि । केही समय लन्डन समेत बसेका उनले नेपालमा सस्तो र राम्रो सुविधा पाएको महसुस गरें । उनी भन्छन्,‘लन्डनमा त व्यावसायीक रूपमा नै यस्ता ठेगाना पाइन्छन्, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि सुरु भएको रहेछ ।’ रविले हरेक पटकको काठमाडौं बसाईलाई सुखमय बनाउने सजिलो माध्यम पनि भेटेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
म एकदम ठिक छु म कुनै दुर्घटनामा परेको छैन – प्रमोद खरेल